दिदी, तिहार परदेशीका लागि हैन रहेछ - eNepal
पुजनीय दिदी सेवा ढोग । आराम छु आरामताको कामना गर्दछु । दिदी नेपाली हिन्दुहरुको दोस्रो ठुलो महान पर्व शुभ दीपावली बेला घर आगनमा आइपुगेको छ ।गाँउघर तिर देउसी भैले खेल्न थालिसके होलान् । तर के गर्नु दिदी तिम्रो प्यारो भाई सात समुन्द्र पारी छ।बिना भाई न तिज आएको छ न दशै न अब तिहार नै आउछ भनेर आमा सँग दशैंमा रुदै थियौ रे । यसपालीको पनि तिहारमा पनि तिम्रो प्यारो भाई फर्किएन भनेर धेरै चिन्ता नगर ।
दिदि कति रमाइलो थियो है हाम्रो बाल्यकाल ? संगै भयो कि सानो सानो निहु झिकेर झगडा गरिहाल्नु पथ्यो हामीलाई । तर फेरि एक छिन पनि छुटिएर बस्न सक्दैनथ्यौ । एउटा नहुँदा अर्कोलाई छटपटाहट सुरु भइहाल्थ्यो । त्यही भएर गाँउतिर भन्ने गर्थे “यिनीहरूका दिदीभाई मिल्न पनि नसक्ने छुट्टिन पनि नसक्ने दोभानमा जोडिएका नदि जस्तो ।” साँच्चै है ! दिदी माया भनेकै त्यही रहेछ । अहिले त हामी घाम र जुन जस्तो एउटै धर्तीमा भएर पनि कोसौँ टाढा भएका छौ । अहिले तिमी घरबारे भएकी छौ, चाहेर पनि जन्म घरमा आउन पाउदिनौ र म पनि त्यस्तै त भएको छु नि दिदी। तिम्रो बिहे भएको महिना दिन पनि नबित्दै कमाउने सपना बोकेर जापान आएको सात वर्ष बितिसकेछ अझै फर्किन सकेको छैन ।
अमेरिकी निर्वाचनमा मेरिल्याण्डबाट नेपाली मूलका ह्यारी भण्डारी संसदमा विजयी
मेलबर्नमा नेपाल सम्बत र म्हपुजा मनाईयो